Are you thinking to change your IT career? – NEX4 Blog
Are you thinking to change your IT career?
IT Career ကို လက်လျှော့ဖို့ တွေးနေမိပြီလား❓❓
😇 ဘဝမှာဖြစ်ချင်တာတွေ၊ လုပ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေက မက်ရတာ လွယ်ပေမယ့် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရမှာ အခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့တွေ့ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
👨‍🎓 ကျွန်တော်တို့ဟာ IT Field ထဲမှာ Career တစ်ခုယူပြီး အိမ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်မယ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီဆိုရင် ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Career ကို လက်မလျှော့ဘဲ ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အတွက် အလေးထားပြီး လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်အချို့ရှိပါတယ်။
1. တကယ်လို့ ကိုယ့် Career နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်မပြေဘူးလို့ ခံစားနေရပြီဆိုရင် ဘာကြောင့်အဆင်မပြေတာလဲဆိုတဲ့ အဖြေကို အရင်ရှာပါ။ ရှေ့လျှောက် ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရင် အဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာကို အချိန်ပေးပြီး အစီအစဉ်ချပါ။ Positive Experiences တွေထက် Negative Experiences တွေကို ပိုပြီး လေ့လာသင်ယူသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ဒီ Career နဲ့ ရှေ့ဆက်တဲ့အခါ အဆင်မပြေတာတွေဘယ်လိုပဲ ကြုံတွေ့ပါစေ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ကျော်လွှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2. ကိုယ့်ရဲ့ အထက်လူကြီးက အလုပ်နဲ့ ပက်သတ်ပြီး ဖိအားတွေပေးတဲ့အခါ သူ့ရှေ့မှာ အရမ်းကို Stress ဖြစ်ဟန် မပြပါနဲ့။ ဒီလိုအခြေအနေမှာတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုရှိအောင် နေပါ။ အထက်လူကြီးခိုင်းတာတွေကို တတ်စွမ်းသလောက်ကြိုးစားပြီးလုပ်ပါ။ တကယ်လို့ အထက်လူကြီးက သူခိုင်းတဲ့ အလုပ်ကို အောင်မြင်အောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်က တတ်စွမ်းသလောက် ကြိုးစားခဲ့ပေးတယ်ဆိုပြီး တွေးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖိအားတွေကို စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်စွာနဲ့ ဖြတ်ကျော်ပါ။
3. ကိုယ့်ရဲ့ IT Field ထဲက အသိတွေနဲ့ ခင်မင်မှုကို ရေရှည်တည်မြဲအောင် ထိန်းသိမ်းပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အမှားတစ်ခုခုကြောင့်မတော်တဆ ခင်မင်မှု ပျက်ယွင်းသွားရင် သူတို့နဲ့ဆက်စပ်ပြီး ရရှိမဲ့ Career အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်း ကိုယ်က မရနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် IT Field ထဲက မိတ်ဆွေများနဲ့ Relationship ကို အချိန်ကြာကြာ တည်မြဲနေပါစေ။
4. ရုံးချိန်ပြင်ပမှာ ရုံးကလူတွေစုပြီး မုန့်သွားစားတာ၊ ရုံးက ခရီး ထွက်တာ စတဲ့ ရုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Social Gathering Events တွေကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါ။ ဒီလို Event တွေမှာ Senior တွေ ၊ Manager တွေ ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက အတွေ့အကြုံတွေ ဖလှယ်ပြီးတော့ ရှေ့ဆက်မဲ့ Career အတွက် အကြံ ကောင်းတွေရနိုင်သလို Chief Level (Chief Technical Officer ၊ Chief Executive Officer အစရှိသဖြင့် ) က လူတွေနဲ့ ရင်းနှီးမှုပိုရပြီး Career အတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
5. နည်းပညာတွေကတော့ အမြဲအသစ်ထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့် Career နဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ နည်းပညာအသစ်တွေကို မလေ့လာပဲ နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့ နည်းပညာအဟောင်းနေရာမှာ ကိုယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့နည်းပညာအသစ်တွေက အစားထိုးသွားတဲ့အခါ အခက်အခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် နည်းပညာအသစ်တွေကို လေ့လာပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် Adapt လုပ်ပါ။
6. အဖွဲ့က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ၊ အခြား Department က ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်တွဲလုပ်ဖို့ ကြုံလာတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Interpersonal Skills တွေ ၊ Soft Skills တွေကို မြှင့်တင်ပါ။ တခြားသူတွေရဲ့ ပြောစကားကို ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးပါ။ ကိုယ်က Position ပိုမြင့်နေရင် လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပါ၊ နေရာပေးပါ။
7. Fields မျိုးစုံက Basic Certificates လေးတွေ လိုက်ယူမနေဘဲ ကိုယ့် Career နဲ့ သက်ဆိုင်ပြီး Level တစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ Certificate တစ်ခုကို ဖြေထားပါ။ Certificate က Level တစ်ခုအနေနဲ့ Career ရှေ့ဆက်ဖို့ကို အထောက်အကူဖြစ်သလို Salary ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်း အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။
👨‍💻 ပြောင်းလဲလာတဲ့ နည်းပညာနဲ့အမျှ ကိုယ့် Career ကိုပါ Trendနဲ့ အမီလိုက်နိုင်အောင် အဓိက လုပ်ဆောင်ပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း ဒီ Article လေးကို ဒီမှာပဲ အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။